Stay with me! Iran 40 andro aorian'io dia mijanona ho Xenophobic
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Stay with me! Iran 40 andro aorian'io dia mijanona ho Xenophobic
Tamin'ny 2008 dia antenaina ny fandraisana andraikitra amin'ity gazety ity ho an'ny get Iraniana natosiky ny hevitra momba ny Peace Through Tourism.
Andro vitsy lasa izay dia andro faha-40 tamin'ny fifandonana mahery setra iray andro teo amin'i Iran sy Etazonia ary ny fidinana amin'ny fiaramanidina mpandeha Okrainiana any Tehran. Betsaka ny olona no nankalaza izany andro izany tany Iran.
Ny miaramila amerikana dia tsaboina noho ny fahasimban'ny ati-doha any Etazonia, maty ny Iraniana, ary mpandeha fiaramanidina 176 no nanjavona, ny ankamaroany dia avy any Canada, nanidina tamin'ny sidina Ukraine Airlines PS752. Tokony horaisina ho toy ny fahasimbana antoka ve izany?
Ny atmosfera eny an-dalambe any Iran dia xenophobic sy vainglorious. Midika izany fa olona maro no mampiseho tsy fankasitrahana na fitsarana an-tendrony amin'ireo olona avy amin'ny firenen-kafa ary mirehareha amin'ny tenany loatra. Mahatsiravina ny toekarena, ary misy sazy mihatra amin'ny olona rehetra ao amin'ny Repoblika Islamika.
Ireo Iraniana izay nilaza tamin'ny eTN tamin'ny 2008 fa tian'izy ireo i Etazonia dia tsy afaka mahazo visa intsony.
Ity ny sasany amin'ireo valiny eTurboNews ny mpamaky sy ny masoivohon'ny eTN dia mifandraika amin'ity famoahana ity.
Tsara fanahy ny olona eto Iran mampalahelo ny zava-nitranga tamin'io gadona Okrainiana iot, mbola mitomany ny olona sasany. Nandefa fahatsiarovana i Okraina Airlines.
eTN Reader Mahtab Ghassemzadeh avy any Iran dia nanatratra izany eTurboNews milaza hoe: "Miezaka ny hitadidy mandrakizay ny fahatsiarovana ireo olona tsy manan-tsiny ireo aho amin'ny fanoratana boky roa, ny iray miaraka amin'ny fampahalalana rehetra momba ny mpandeha sy ny ekipa rehetra. Tsy ampy fampahalalana momba ny mpikambana ekipa vitsivitsy aho. Ny boky hafa dia tononkaloko noforoniko ho an'ireo tra-boina tao anatin'ny 40 andro lasa. Ny iray antsoina hoe MIjanona AMINY amiko ary ny iray antsoina hoe FIVORIANA Mandrakizay. ”
Ny taratasiny ho an'ny tonian-dahatsoratra:
Ry tonian-dahatsoratry ny eTurbo News:
Izaho dia Mahtab Ghassemzadeh, mpanoratra sady poeta Iraniana. Faly be aho namaky ilay lahatsoratra navoakanao momba ny fitokanana ny valan-javaboary ho fahatsiarovana ireo iharan'ny sidina ukranianina.
Tiako koa ny mampahafantatra anao ny zavatra nataon'ny Iraniana, izay naratra mafy sy nalahelo tamin'ity tranga nahatsiravina ity, tamin'ny fanehoana ny fangorahan'izy ireo an'ireo sisa velona tamin'ny sidina.
Amin'ny maha-mpanoratra ahy dia navitrika hatramin'ny voalohany aho tamin'ny fanombohana ny lanonana tamin'ny fanilo labozia sy ny fandinihana ny fandraisan'anjaran'ny vahoaka Iraniana mba hampiseho ny alahelon'izy ireo amin'ity hetsika mahatsiravina ity manerana ny firenena.
Izaho, miaraka amin'ireo olona an'arivony, dia nanova ny mombamomba anay tao amin'ny media sosialy ho loko mainty hanehoana ny fangorahantsika an'ireo niharam-boina sy ireo tafavoaka velona taminy.
Mpanakanto marobe ary indrindra ny poeta no naneho ny alahelony tamin'ny famoronana tononkalo ary nitomany tamin'ity hetsika mampalahelo ity.
Izaho, izaho dia nihaona tamina tafavoaka velona maro ary nanomboka nanangona vaovao tamin'ny endrika boky momba ireo mpandeha sy tratran'ny ekipa ary namoaka boky tononkalo mitondra ny anarana hoe Flight Eternal, natokana ho an'ireo ankizy niharan'ny sidina PS752.
Izaho koa dia mamoaka tononkalo natokana ho an'ireo niharam-boina tamin'ny sidina tamin'ny anarana hoe Mijanona Amiko.
Amin'ny maha mpanoratra ahy dia ezahako ny hitazomana ny anarana sy ny fahatsiarovana ireo niharam-boina. Manantena aho fa hahomby amin'ity ezaka ity.
Tsy ampy anarana sy fampahalalana momba ny mpiasa ekipa vitsivitsy aho mba ho tafiditra ao amin'ilay boky. Ny fampahalalana momba ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia hankasitrahana fatratra.
Mirary anao ary eTurboNews fahombiazana.
Mitohy ny fitifirana faobe any Alemana